RASMi: Alexis Sanchez oo aan ciyaari doonin kulanka Juventus ee tartanka Champions League – Gool FM
(Manchester) 22 Okt 2018. Tababaraha reer Portugal Jose Mourinho ayaa shaaca kaga qaaday shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulanka ay kooxaha Manchester United iyo Juventus ay ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League inuu seegi doono laacibka reer Chile ee Alexis Sanchez.
“Dhamaan ciyaartoydii ka qaybgashay tababarka ayaa la heli karaa adeegooda kulan Manchester United waxaa heesanay liiska 5 ciyaartoy ee inaga maqan, Alexis Sanchez ayaa isna qeyb kasoo noqday”.
“Marouane Fellaini ayuu dhaawac kasoo gaaray muruqa bowdada, inta uu ku gudi jiray waajibaadka xulkiisa qaranka Belgium, sidoo kale Jesse Lingard wuxuu qabaa dhaawac dhanka muruqa ah tan iyo kulankii West Ham”.
“Phil Jones iyo ciyaaryahanka cusub ee kooxda Manchester United Diogo Dalot ayaa iyagana dhaawac ku maqan”.
Si kastaba Manchester United iyo Juventus ayaa ku kulmi doona Talaadada garoonka Old Trafford, xili Cristiano Ronaldo uu booqan doono kooxdiisii hore ee Red Devils, kaasoo si xoogan isugu muujiyay kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid.